MyanCare | သွားတွေ ဘာကြောင့် ကျဉ်ရတာလဲ?
သွားတွေ ဘာကြောင့် ကျဉ်ရတာလဲ?
by myatlynn | Aug 4, 2020 | သွားနှင့် ခံတွင်း
အခုတလော ကျွန်တော့်ဆေးခန်းတွေမှာ တွေ့ရတာအများဆုံးကတော့ သွားကျဉ်တဲ့ လူနာတွေပါပဲ ။
ရာသီဥတုက အေးလာတော့ သွားတွေလည်း အေးလာရောတဲ့ ။ သွားကျဉ်တာကို တချို့လူနာတွေက သွားအေးတယ်လို့ သုံးနွုန်းကြတာ ။
သွားကျဉ်တာဟာ တချို့လူတွေမှာကျ ရေပူ ရေအေးသောက်မှ ကျဉ်တယ် ။ တချို့လူတွေမှာကျ အချိုစားတဲ့အခါ ကျဉ်တယ် ။ တချို့ကျ ဒီအတိုင်းတစ်နေကုန်ကို သွားကျဉ်ပြီး ပါးကြောတွေပါ နာလာတော့တာပဲ ။
သွားကျဉ်တာဟာ ခဏတာအခြေအနေမျိုး အရမ်းကြီးနေရခက်တာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက် ဆေးခန်းကို သွားကျဉ်လို့ လာပြရင် တော်တော်ကို ကျဉ်နေလို့ လာပြတာပါ ။ လူတော်တော်များများကတော့ သွားကျဉ်တာကို သတိထားမိရင်တောင် ဆေးခန်းပြရကောင်းမှန်း မသိကြပါဘူး ။
သွားကျဉ်တာဟာ သွားကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးပါတယ် ။ သွားကျဉ်တာဟာ သွားနှင့်ခံတွင်းရောဂါတစ်ခုရဲ့ အစလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ ။
လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သွားကျဉ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း မတူကြပါဘူး ။ သွားကျဉ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ သွားကျဉ်တာဟာ ပေါ့ပေါ့ဆဆနေသင့်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိသွားပါလိမ့်မယ် ။
သွားတွေဘာလို့ ကျဉ်ရတာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်…။
(၁) သွားပိုးပေါက်များ ။
ကျွန်တော်တို့သွားတွေကို လှပအောင် ခိုင်မာအောင် အကာကွယ်ပြုထားတာက “သွားရဲ့ ကြွေလွာ” ပါ။ ကြွေလွာဟာ ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အမာဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ ကြွေလွာရဲ့ အောက်မှာ ” ဆင်စွယ်နှစ်လွာ ” ဆိုတဲ့ ဆင်စွယ်ရောင် အလွာတစ်ခုရှိတယ် ။ သူ့အောက်မှာတော့ အာရုံကြောတွေ သွေးကြောတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ “မွသွားလွာ” ဆိုတဲ့ အူတိုင်လေးရှိပါတယ် ။ ဒီတော့ သွားရဲ့ အပြင်ဘက်အခုမြင်နေရတာ ကြွေလွာ ။ သူ့အောက်မှာ ဆင်စွယ်နှစ်လွာ ။ အတွင်းဆုံးအူတိုင်လေးကတော့ မွသွားလွာပေါ့ ။
ဒါကိုမြင်ရင် ဆက်ဖတ်ရအောင် ။ အောက်မှာ ပုံလေးလည်း ပြထားပါတယ် ။
သွားပိုးစားတဲ့အခါ ကြွေလွာကနေ စစားပါတယ် ။ အဲ့ဒီအချိန် များသောအားဖြင့် ဘာခံစားမွုမှ သိရဦးမှာမဟုတ်ပါဘူး ။ ကြွေလွာမှာ သွားပိုးစားတာကို သတိမထားမိပဲ သွားမဖာမိဘူးဆိုရင် သွားပိုးစားတာက ဆင်စွယ်နှစ်လွာကို ရောက်လာပါပီ ။ ဆင်စွယ်နှစ်လွာဟာ အတွင်းထဲက အာရုံကြောတွေနဲ့ အတော်နီးလာတာမို့ သွားဟာ စကျဉ်လာပါတော့တယ် ။
ဒီအခြေအနေမှာ သွားမဖာမိဘူးဆိုရင် မကြာခင် သွားကိုက်လာတော့မှာ အသေအချာပါပဲ ။
(၂) သွားရဲ့ အပေါ်ယံကြွေလွာများပျက်စီးခြင်း ။
သွားရဲ့ ကြွေလွာတွေဟာ စားတာဝါးတာကြာလာတဲ့အခါ သဘာဝအတိုင်း ပျက်စီးတတ်ပါတယ် ။ အသက်ကြီးတဲ့ လူတွေမှာ ကြွေလွာတွေ ကုန်နေတာကို တွေ့ရတတ်ပါတယ် ။ အသက်ကြီးတဲ့လူတွေပြောလေ့ရှိကြတဲ့ မြန်မာစကားတောင်ရှိတာပဲ ” ငါတို့က အံတိုနေပြီ ” ဆိုတာ ။ အသက်ကြီးလာတာကြောင့် ကြွေလွတွေကုန်ပြီး သွားတွေဟာ တိုတိုလေးတွေဖြစ်လာတာပါ ။
ကြွေလွာတွေဟာ သဘာဝအတိုင်း ကုန်သွားတာ မှန်ပေမယ့် သွားကျဉ်တာကို ခံစားကြရပါတယ် ။ များသောအားဖြင့် အသက် ၄၅ နှစ်လောက်ကနေ ပျှမ်းမျှတွေ့ကြရပါတယ် ။
သဘာဝအတိုင်းမဟုတ်ပဲ ကြွေလွာတွေ ပြုန်းတဲ့သူတွေကတော့ ညဘက်အိပ်ရင်း သွားကြိတ်တာအကျင့်ရှိတဲ့သူတွေ ၊ ကွမ်းယာစားတဲ့သူတွေ ၊ အချဉ်စားတာများတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ် ။
သူတို့တွေမှာတော့ အရွယ်မတိုင်ခင် သွားကြွေလွာတွေပြုန်းလေ့ရှိပြီး သွားကျဉ်တာအပြင် မေးရိုးပြဿနာများကိုပါ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ် ။
(၃) သွားအကျိုးအပဲ့များ ။
သွားအကျိုးအပဲ့တွေဆိုတာ သွားပိုးစားတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သလို မတော်တဆ ထိမိခိုက်မိတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ တစ်ခုခုနဲ့ တိုက်မိဆောင့်မိလို့ သွားကြွေလွာတွေပဲ့သွားရင်လည်း သွားကျဉ်တတ်ပါတယ် ။ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ပဲ့သွားတဲ့နေရာကို ပြန်လည်ဖာထေးခြင်း သို့မဟုတ် သွားအစွပ်စွပ်ပေးခြင်းများကို လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
(၄) ဖာထားတဲ့ သွားတွေ မလုံတော့ရင်…။
သွားတွေကျဉ်လို့ သွားတွေကတော့ ဖာလိုက်ပါပြီ ။ ပစ်ထားလို့ မရပါဘူး ။ အမြဲတမ်း ထိန်းသိမ့်ပြီး စစ်ဆေးပေးရပါမယ် ။ ဖာထားတဲ့ ဆေးက ကွာသွားပြီး သွားဖာတာ ဟသွားခဲ့ရင် သွားပြန်ကျဉ်နိုင်ပါတယ် ။ သွားဖာထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ သွားဖာတဲ့ဆေးက ကွာသွား/ဟသွားတာကို သံသယရှိပါက ချက်ချင်းဆေးခန်းပြန်ပြပေးပါ ။
(၅) သွားအမြစ်တွေ ပေါ်နေမယ်ဆိုရင်…။
ကျွန်တော်တို့သွားရဲ့ အမြစ်တွေကို သွားဖုံးတွေက အကာအကွယ်ပေးထားကြပါတယ် ။ သွားဖုံးတွေ အောက်ကိုကျသွားရင် သွားအမြစ်တွေ ပေါ်လာတော့တာပါပဲ ။ ဒါဆို သွားအမြစ်တွေဟာ အကာအကွယ်မရှိတော့ပဲ သွားကျဉ်တာကို ခံစားရပါတော့တယ် ။ သွားဂျိုးတွေကြောင့် /သွားဖုံးရောင်တာကြောင့် သွားဖုံးတွေ အောက်ကိုနိမ့်ကျသွားပြီး သွားအမြစ်တွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်…။ ဒါကတော့ သန့်ရှင်းရေးအားနည်းလို့ဖြစ်ပါတယ်…။
စနစ်မှန်သွားတိုက်နည်းဖြင့် သွားမတိုက်ပဲ သွားကို ကန့်လန့်ဖြတ်ကြီး တချိန်လုံးတိုက်နေမယ်ဆိုရင် သွားဖုံးတွေစုတ်ပြတ်သတ်ပြီး သွားအမြစ်တွေပေါ်လာတတ်ပါတယ် ။ ဒီလိုကန့်လန်ဖြတ်ပြီး သွားတိုက်နေရင် သွားအမြစ်တွေပေါ်လာတာအပြင် သွားရဲ့ခါးမှာ အချိုင့်ရာ အပြတ်ရာတွေပါ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ် ။
ဒါဆို သွားပိုကျဉ်ပြီပေါ့ ။
လူနာတော်တော်များများက သွားကျဉ်တာကို ပျောက်သွားမှာပါလို့မျှော်လင့်ရင်း ပေါ့ပေါ့လေးသဘောထားပြီး နေလိုက်ကြတာများတယ်…။
နောက်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် သူများတွေကို ဟိုမေးဒီမေး မေးပြီး ကုကြသေးတာ…။ ဟိုလူကတော့ ဒီဆေးနဲ့ပျောက်တာတဲ့ဆိုရင် သူလည်း ဒီဆေးနဲ့ပျောက်မှာဆိုပီး ချတော့တာပဲ…။
ဒီတော့ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် သွားကျဉ်ပြီဟေ့ ဆိုမှသာ ဆေးခန်းရောက်လာတာများပါတယ်…။
တကယ်တော့ သွားကျဉ်လာပြီဆိုကတည်းက ဆေးခန်းကိုရောက်လာရင် သွားတိုက်ဆေးလေးတိုက်ရင် ပျောက်မယ့်ကိစ္စက သွားအကြောထုတ်တာ တချို့ဆို နူတ်ရတာအထိဖြစ်သွားတတ်တယ်…။
သွားကျဉ်တာကို ကုသတဲ့နေရာမှာ သူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်မူတည်ပါတယ်…။ ဒီတော့ “ငါကတော့ ဒီသွားတိုက်ဆေးသုံးတာ သက်သာတယ်” လိုပြောတဲ့အခါ အဲ့ဒါကြီး ဇွတ်သုံးမနေနဲ့….ဆေးခန်းလာပြပါ…။ သူပျောက်ပေမယ့် ခင်ဗျားကျ ပျောက်ချင်မှပျောက်မယ်…။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သွားကျဉ်တာတူပေမယ့် ဖြစ်ကြတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေ ကွာပါတယ် ။
တကယ်လို့ သွားပိုးစားတာကြောင့်ကျဉ်တယ်ဆို ဖာရင်ကောင်းသွားရော…။
တချို့ကျလည်း အပေါ်ကနေ သွားတုအစွပ်လေးတွေစွပ်တန်စွပ်…။
အရမ်းဆိုးပြီး တချိန်လုံးကျဉ်နေတဲ့ သွားဆိုရင် အကြောထုတ်တဲ့ ကုသမွုခံယူသင့်ရင်ခံယူ…။
သွားနူတ်တဲ့အဆင့်အထိကြီးရောက်သွားအောင် ပေတေပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အိမ်မှာမကုသကြဖို့ပါ…။
ဆေးတွေညွန်းတတ်တဲ့ ဆရာဝန်မဟုတ်တဲ့ စေတနာအမှားများရှင် အိမ်နီးချင်းမိတ်ဆွေ ဆွေမျိုးသင်္ဂဟတွေကိုလည်း မယုံဖို့ပါ…။
ကျွန်တော်ဒီလိုတွေ စာတွေတော်တော်များများထဲ ထည့်ထည့်ရေးတော့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကတောင် ကျွနတော့်ကို လှမ်းနောက်တယ် ။
“လူနာတွေဆိုတာ ဆရာဝန်စကားပဲ နားမထောင်တာ ကျန်တာ ဘယ်သူပြောပြော နားထောင်တယ် ” တဲ့ ။ ကဲ…။
ဒီတော့ ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက သွားကျဉ်တာဟာလည်း အရေးကြီးတယ်… ဆေးခန်းပြသင့်တယ်ဆိုတဲ့ message လေးကို ပေးချင်တာပါ…။
ကဲ ဆေးခန်းလာဖို့မပျင်းပါနဲ့… မကြောက်ပါနဲ့…။
သွားတစ်ချောင်းဆိုတာ အရမ်းအဖိုးတန်တာပါနော်…။မိမိပါးစပ်ထဲက သွားလေးတွေကျဉ်နေတာများရှိရင် မိမိပြနေကျသွားဆရာဝန် သို့မဟုတ် နီးစပ်ရာ သွားနဲ့ခံတွင်းဆေးခန်းမှာ အချိန်ပေးပြီးဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေခင်ဗျာ ။
တုပ်ကွေးနဲ့ ကလေး၊ လက်ဦးမှုယူ ကာကွယ်ပေး